PineTab + UBports: Matambudziko ekutanga uye dzimwe mhinduro | Linux Vakapindwa muropa
Yokutanga pinetab Yekutanga Adopter vasvika. Ukangotanga iwo, chiziviso chinowoneka kuti ndiwe wekutanga pasi rose kuva nacho, uye kuti, pamwe chete nenyaya yekuti ndiyo yakanyanya kusati yadzikwa, zvinorevawo kuti yasvika nematambudziko. Dzakati wandei dzadzo dzakatove dzakazivikanwa uye dzakaburitswa pane iro peji ravakavhura mu piritsi wiki. Vamwe vane mhinduro, asi kune vazhinji tichafanirwa kumirira kuti vanogadzira vagadzirise.
Chinhu chekutanga chatinoita patinotenga nhare kana piritsi ndeyekuyedza kamera yayo, uye icho chinhu chatisingazokwanise kuita muPineTab parizvino. Panogona zvakare kuve nechinetso neiyo WiFi, asi zvinoita sekunge kudzosera kumashure ichi chimwe chinhu icho vasingataure Chirungu vashandisi vasingazosangana nazvo nekuti zvine hukama nekanyama khibhodi. Pazasi iwe une iyo runyorwa rwematambudziko iyo PINE64 yakatumira paPineTab yake, uye mamwe andichawedzera ndega.
1 PineTab Pakutanga Adopter Matambudziko Ekutanga
2 Inosvika ine beta vhezheni yeUBports
PineTab Pakutanga Adopter Matambudziko Ekutanga
Iyo mbeva haigone kufambiswa kuyambuka iyo skrini yese, chete mune 800px yakatwasuka bhokisi. Izvi zvinogadziriswa nekukatanura panyama keyboard kana uchitanga PineTab kekutanga uye kugadzirisa iyo inoshanda sisitimu, inozoenda kubva Kubuntu Kubata v3 kusvika v4.
Bluetooth haisi kushanda nekuti haigone kuvhurwa. Hongu tinogona kupa chinja, asi hachimidze kana kutsvaga zvishongedzo.
Makamera haashande, kana. Inoita kunge iri dambudziko reapp (?).
Portrait mode haishande. Iyo inogara iri mumamiriro ekunze uye hazvina basa kana isu tichiedza kurova switch kakawanda; handiende.
Pane kukanganisa uko kunoita kuti piritsi rikwanise chete kuwana gumi neshanu ne16GB yarinayo yekuchengetedza. PINE64 yakati inogona kugadziriswa nekuwedzera saizi yekuparadzanisa nemaoko, asi pawiki, uye chimwe chinhu chandakaudzwa pachezvangu, ivo vanoti UBports iri kugadzirisa mhinduro inozozviita zvoga pasina isu kurasikirwa chero data.
Iyo WiFi inonyangarika, pamwe nekuti ini ndakatanga nekanyama khibhodi yakabatana. Pane mhinduro dzinoverengeka dzeizvi:
Regedza uye shandisa iyo WiFi kubva kuchinjiso.
Kana zviri pamusoro zvikasashanda, isu tinozovhura terminal uye tinyore mirairo inotevera (pasina makotesheni): "nmcli r" uye "nmcli r wifi pa". Avo vakatanga piritsi nekhibhodi yakaiswa vanogona zvakare kuyedza kuisa rairo "sudo service urfkill restart".
Kuteedzera nekunamatira mune iyo maneja faira kunogona kutangazve iyo inoshanda sisitimu.
Screenshots haishande, asi izvi hazvishande paPinePhone futi. Dambudziko nderekuti mabhatani evhoriyamu ari pamwechete, saka mubatanidzwa bhatani + vhoriyamu kumusoro haushande. Mumwe wevatungamiriri vanogadzira paUBports akandiudza kuti kwave kutove nechikwata pane izvi chichaita kuti sarudzo iratidzike pane bhatani rekuvhara padyo nesarudzo dzekuvhara uye kutangazve iyo PineTab.
Maakaunzi haakwanise kuwedzerwa kubva kuSystem Zvirongwa.
Libertine mifananidzo maapplication haashande kunze kwekunge iwe uchinjira kuxwayland.
Sezano: kana kumutsiridza kuchiramba kuri nhema kwenguva yakati, pachangu zvave zvakanaka kwandiri ndichiimanikidza kudzima (bhatani rekubvisa kwemasekondi akati wandei) uye kuritendenazve. Haisi dambudziko hombe kuziva kana iwe urikuita chimwe chinhu kana kwete nekuti PineTab inoita ruzha rudiki painoshanda; Kana pasina chinonzwikwa panguva iyoyo, isu takatodzima uye tinogona kuibatidza zvakare.
Mamwe maapplication kubva kuOpenStore kuparara mushure mekumisikidzwa, chimwe chinhu chinoitikawo paPinePhone. Dzimwe nguva mhinduro ndeye kuvhura ivo kutanga muDesktop vhezheni.
Inosvika ine beta vhezheni yeUBports
Iyo PineTab inosvika ine beta vhezheni yeUbuntu Kubata kubva kuUBports, saka kukundikana kwakajairika. Sezvo nguva inopfuura, zvinhu zvichachinja uye ini handigone kubatsira asi kufungidzira ramangwana uko PineTab kana chero imwe nharembozha yeLinux piritsi iri sarudzo hombe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Matambudziko ekutanga ePineTab + UBports uye mamwe emhinduro dzayo atozivikanwa
Chromebook: ichawedzerawo maARM machipisi